TATITRY NY FIFIDIANANA DEPIOTE : Niaiky ny fahamaroan’ny lesoka ny ivon-toerana Safidy
Omaly no nanatitra ny tatitra mahakasika ny fifidianana solombavambahoaka izay notanterahina ny 27 mey lasa teo ny ivon-toerana Safidy na ny Sampana Anarahamaso ny Fifidianana, Ivon’ny Demokrasia Ifarimbonana. Niaiky izy ireo fa nizotra am-pilaminana tanteraka ny fanatanterahana ny fifidianana saingy mbola maro ireo lesoka mila arenina. 12 juillet 2019
Hentitra ny teo anivon’ny Vaomieram-pirenena mahaleo tena misahana ny fifidianana raha nilaza fa izay fiarahamonim-pirenena nandray anjara tamin’ny fanaraha-maso ny zotram-pifidianana dia tsy maintsy manao tatitra. Voakasik’izany avokoa na avy eo an-toerana na ireo avy any ivelany. Somary taraiky anefa ny fanatanterahan’ireo fiarahamonim-pirenena izay tatitra izay.
Ho an’ny ivon-toerana Safidy manokana dia omaly vao voaatitra teny amin’ny foiben’ny Céni ny tatitry ny fanaraha-maso nataony nandritra ny fifidianana solombavambahoaka farany teo iny. Ity farany izay nanana solontena tamin’ireo birao fandatsaham-bato manerana ny Nosy. Resy lahatra ny ivon-toerana Safidy fa nizotra am-pilaminana tanteraka ny fifidianana manerana ny Nosy ary novatsian’ny vondrona Eoropeanina vola. Ny 98%-n’ireo birao fandatsaham-bato no tsy nahitana korontana tamin’iny andron’ ny latsa-bato iny. Natsikafon’ izy ireo kosa anefa fa mbola marobe ireo lesoka ary mila arenina amin’ny fikarakarana ny fifidianana ho avy. Nambarany fa misy tamin’ireo lesoka efa hita tamin’ny fifidianana teo aloha aza no mbola niverina indray tamin’ ny fifidianana farany teo iny. Anisany notsindriany tamin’ izany, ohatra, ny mahakasika ny lalàna mifehy ny fifidianana izay tsy nampahafantarina ny olom-pirenena tamin’ny antsipiriany.
“Ny ivon-toerana Safidy dia nahatsapa fa tsy nisy mangarahara ary maimaika sy nisy fanilihana ny fanovana ny lalàna mifandraika amin’ny fifidianana solombavambahoaka indrindra mikasika ny fanovana ny fomba fizaràna toerana, izay tsy nampahafantarina ny besinimaro raha tsy taorian’ny fandaniana azy”, hoy izy ireo tao anatin’ny tatitra. Hentitra izy ireo raha nilaza fa maro amin’ireo andininy ao anatin’ io lalàna noentina nanatanterahana ny fifidianana io mihitsy no misy tsy fahatomombanana.
Ambany ny taha
Nanamafy ny ivon-toerana Safidy fa ambany dia ambany ny taham-pahavitrihan’ny olom-pirenena tamin’ny fifidianana farany teo iny. Midika izany fa maro amin’ny olom-pirenena no tsy manana fahatokisana zato isan-jato eny amin’ny antenimieram-pirenena intsony. Ary taha nahavoafidy ireo solombavambahoaka ihany koa dia ambany. “Ambany ny taham-pandraisana anjara nahavoafidy ireo solombavambahoaka. Izany fandraisana anjara ambany tena izy dia taratry ny tsy fitokisan’ ny olom-pirenena ny Antenimiera”, hoy ilay tatitra. Ankoatra ireo dia notsipihany ihany koa ny fisian’ny lesoka teo amin’ny lisi-pifidianana izay tsy mety tafaverina mihitsy.
Tsy ampy, hoy izy ireo, ny fampahafantarana natao tamin’ireo olom-pirenena mpifidy mahakasika ny fiovan’ny lisi-pifidianana. Miompana amin’ireo pitsopitsony isan-karazany, toy ny fitsipika tokony hifehy ireo kandidà mandritra ny fampielezan-kevitra dia nanambara ny ivon-toerana Safidy, fa maro ireo tsy fahatomombanana hita. Manoloana ireo lesoka tamin’ ny fifidianana ireo ity fiarahamonim-pirenena ity dia manolotra soson-kevitra mba hampizotra tsara ny fifidianana amin’ny ho avy. Isan’ izany ny hametrahan’izy ireo fomba fiasa manokana eo amin’ny fanaraha-maso izay hatao.